August 2019 – siifsiin
Umurii Maqaa Sadarkaa Gadaa
0-8 Dabballee Barataa(qananii) Guduruu 8-16 Ittimakoo (G.Duraa) Barataa ykn Tika(loon) Ulee Qal'oo 16-24 Foollee (G.Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo 32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee 40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo 48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 64-72 Luba … Continue reading Umurii Maqaa Sadarkaa Gadaa
Kan akka ''Harriet Tubman'' jireenyaa maatii isaani fi haala hunda moo'atan! Hir'inaafi hiyyuma mataa isa cabseef kan hin jilbeenfanne,halkaniifi guyyyaa jireenya qabsoo abbaafi haatisaa keessa ce'anii as ga'an homaattuu kan hinlakkoofne sarbeessaan ilma maatii qotee bulaati. Gidiraa ijoollummaan mataa isa cabsaa ture hunda har'a isaaf mudannoo godaannisaa hindagatamnedha.sammuusaan kanatti qabamee mul'ata fuulduraa kan akka abiddaa … Continue reading Albuuda Qabsoon Boodaa
Senaa Abirhaam Linkoolin
“Galma tokko ga'uuf Kutannoo fi murtoon barbaachisaa dha” Abirahaam Linkooliin Yaalii isaa addaan hin kunne. Abirhaam Liinkooliin, ilma qotee-bulaati. Bakka Hodjeenvillee keentuukii jedhamutti Guraandhala 12,1809 dhalate. Maatiin isaa kan hin baranne yoo ta'an illee inni waggaa tokkoof mana barumsaa galee barachuun jaalala dubbisuu dagaagfateera. Bitootessa, 1830 maatiin Liinkooliin gara Ilinooyisitti jijjiiraman. Qabsoo Jireenyaa Mo'achuuf... Sababa … Continue reading Senaa Abirhaam Linkoolin
Guyyaa tokko jaarsi tokko mucaa saawwan tiksu wayiittii dhufee “ Mucaa kiyya kan eenyuuti ati?” jedhee gaaffate. Mucaan immoo “ Ani abbaa hin qabu” jedheen. Jaarsichi maal ta’e jedheen, Mucichiis in du’e jedhee deebiseef. Jaarsichiis, “ Maali ilma koo abba keetu du’e malee gurraa isaatu du’ee? Jedhee gaaffate. Mucichis, jaarsana narraa deemi, gurra kana beeknee … Continue reading Baacoo
Aadaa Oromoo keessttii geersrsi gosa afoola ta’ee yeroo adda adda tti saba keenya birattii beekkamaa fi jaallatamaadha. Hawaasni keenya miira isaa kan ittin kan itti ibsachaa turee fi ibsachaa jiru dha. Mirrii kennuun gammaachuu, gaddaa, goorummaa fi kunnen birooti. Geerarsa yeroo bayyee kun fayyadamnuuf gootummaa farsuu fi onnee horchiisuuf yemmuu ta’u, dur irraa kaasee hawaasni … Continue reading Geerarsa